Manoranjan Sansar फोटोग्राफि पनि एकप्रकारले डिरेक्शन नै हो : निर्देशक रमेश बोगटी - Manoranjan Sansar
फोटोग्राफि पनि एकप्रकारले डिरेक्शन नै हो : निर्देशक रमेश बोगटी
मनोरंजनसंसार डटकम | Friday, May 20th, 2016
७ वर्ष सम्म प्रोफेसनल रुपमा फोटोग्राफरका रुपमा काम गरिसकेपछि रमेश बोगटीले फिल्म निर्देशनमा हात हाले । उनको डेब्यू निर्देशन रहेको फिल्म ‘किन गरे माया’ यहि जेठ १४ गतेदेखि अल नेपाल रिलिज हुँदैछ । दिलकुमार प्यासी प्रस्तुत लभस्टोरी फिल्म ‘किन गरे माया’ को विषयमा निर्देशक बोगटी सँग फिल्मीकुराका प्रतिनिधीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
-दिलकुमार प्यासीले तपाईमा के सम्भावना देखेर ‘किन गरे माया’ फिल्म निर्देशन गर्ने जिम्वेवारी दिनुभयो ?
म यो फिल्मको डेब्यू निर्देशक हुँ । यद्धपि म फिल्मको लागि भने पुरानै मान्छे हुँ । मैले सात आठ वर्ष प्रोफेसनल फोटोग्राफिमा बिताइसकेको छु । फिल्म क्षेत्रमै फोटोग्राफि गरेकाले एउटा प्यासन लिएर हिडेको थिए कुनै राम्रो फिल्म डिरेक्शन गर्छु भनेर । राजु थापा, सञ्जय लामा जस्ता सिनेम्याटोग्राफि सँग पनि मैले काम सिक्ने मौका पाए । दिलकुमार सरको ‘नशिव आफ्नो’ फिल्ममा पनि सँगै काम गरेको थिए यस अघि । जतिबेला मेरो फोटोग्राफि अझ भनौ प्रोफेसनल काम उहाँलाई चित्त बुझेको थियो । त्यो हिसाबले एउटा रिलेशन हुँदै गयो । एक वर्षको ग्यापमा मैले एउटा स्क्रिप्ट लेखेको थिए । दिल सरले पनि लेख्नु भएको रहेछ । भेटेर दुवैले सल्लाह ग¥यौ । मेरो लगनशिलता उहाँलाई थाहा थियो । दुवै जना फिल्म बनाउने सोचमै थियौ । फेरि नयाँलाई अपरच्युनिटी दिने उहाँको पहिले देखि कै बानी हो । विकास राज आचार्य जो स्क्रिप्ट लेख्नु हुन्थ्यो उहाँलाई निर्देशनमा डेब्यू गराउने काम दिल सरले नै गर्नु भएको हो । यसरी दिल सर सँग लगातार यो प्रोजेक्टका लागि कुरा हुँदै जादा म मा केही सम्भावना देख्नु भयो होला । विश्वास पनि हुँदै गयो । र मैले निर्देशन जिम्वेवारी जुन निभाए उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
-फोटोग्राफि गरिरहेको मान्छे निर्देशनमा हात हाल्दा त्यसले प्लस चाहि के गराउदो रहेछ ?
धेरै सजिलो हुँदोरहेछ । किन भन्दा खेरी फोटोग्राफि पनि एकप्रकारले डिरेक्शन नै हो । फोटो र भिडियोमा मात्र फरक हो । एङ्गल एउटै हो । कम्पोज एउटै हो । पोजिशन त्यहि हो । अब फोटोग्राफिमा पनि लाइटिङ देखि हरेक कुराको ज्ञान हुनुपर्छ । र फिल्म डिरेक्शन गर्दा पनि क्यामेरा देखि विभिन्न एक्स्ट्रा नलेज आवश्यक पर्छ ।
-पहिलो फिल्म डिरेक्शन गर्दा चलेका एक्टर सँग काम गर्ने चाहना थियो होला त्यो त मिट भएन नी ?
डेफेनेट्ली चाहना नहुने त कुरै भएन । हाम्रो टिममा छलफल भएको पनि हो । अहिलेका स्टार अनमोल केसीलाई लिएर काम गर्ने योजना नबुनेको पनि होइन । तर उहाँ त्यतिबेला ‘ड्रिम्स’ फिल्मको सुटिङमा बिजी रहेकाले समय मिलेन । स्क्रिप्ट अनुसार अनमोललाई स्विटेबल छ भनेर नै कुरा अगाडि बढाएका थियौ । अनमोलको अप्सनमा हामीले अरु धेरै कलाकार खोज्यौ । विशेषत यो लभस्टोरी फिल्म भएकाले न्याय गर्न सक्ने कलाकार त चाहियो । त्यसपछि बिकल्पमा योङ्ग एनर्जेटिक आयुष रेग्मीलाई पायौ । तर उहाँ यो क्षेत्रका लागि बिल्कुल नयाँ हुनुहुन्छ । त्यसपछि नायिका पनि नयाँ नै लियौ । नयाँ सँग काम गर्दा पनि नराम्रो लागेको छैन । उहाँहरुले न्याय गर्नु भएको छ आफ्नो पात्रलाई ।
-फिल्मको शीर्षकले चाहि वास्तवमा के भन्न खोजेको हो ?
माया भन्ने कुरा सबैलाई चाहिन्छ । माया पनि एउटा साँचो भन्ने हुन्छ अर्को देखावटी । साँचो माया गरिसके पश्चात विभिन्न कारणले बिछोडिदाको पल कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरालाई चाहि हामीले ‘किन गरे माया’ मा देखाउन खोजेका छौ । बिछोडको तडप वा भनौ बेदना जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले पर्दामा उतारेका छौ । र त्यो स्मरणमा रहिरहन्छ बिर्सन सकिदैन । मर्ने बेला सम्म पनि त्यो साँचो मायाको चाहि याद भइरहन्छ । तर त्यो बेदनालाई चाहि मान्छेले सहनै सक्दैन । हो त्यो बेला चाहि मान्छेलाई फिल हुन्छ रे किन गरे माया भनेर । बेदना छ दुःख सहनु परेपछि आखिर यो माया किन र के को लागि भनेर स्वयम आफैमा व्यक्तिले अनि प्रश्न गर्न थाल्छ । यहि कुरा फिल्ममा दर्शाउन खोजेका छौ ।
-फिल्म रिलिजको संघारमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् त ?
फिल्मको गाना चाहि एकदमै राम्रो बनेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । ट्रेलरलाई रुचाउनु भएको छ । यसको पूर्ण रुप कस्तो छ थाहा पाउनको लागि त फिल्म नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यद्धपि सहकर्मी साथीभाई सबैले एकखालको प्रतिक्षा नै गरिरहेको पाएको छु ।
-फोटोग्राफि र फिल्म निर्देशन मध्ये आगामी दिनमा कुनलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
सिकेको कुरा त कहिल्यै बिर्सिइदैन । फोटोग्राफि त मेरो ७ वर्ष गरिसकेको पेशा नै भयो । दुई मध्ये कुन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहि फिल्म रिलिज पछि नै म निर्धारण गर्छु । किनकि फिल्म चलेको खण्डमा अर्को फिल्म निर्देशन गरु भन्ने स्वाभाविक रुपमा भइहाल्छ ।
-फोटोग्राफिमा चाहि कसरी प्रवेश भयो नी ?
म प्लस टु पढ्दै थिए । परीक्षा सकिएपछि फ्रि टाइममा के गर्ने भन्ने भयो त्यसपछि मैले आफूलाई रुचिको विषय भएकाले फोटोग्राफिको कोर्ष गरे । त्यो भन्दा पहिला त मैले ग्राफिक्स डिजाइन सिके । फोटोग्राफि सिकेपछि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाने सिलसिलामा एकदिन निर्देशक दिपक रायमाझी सँग भेट भयो । मेरो घर पनि उहाँको नजिकै भएकाले आत्मियता बढ्दै गयो । उहाँको प्रोजेक्टका प्राय फोटोग्राफि मैले नै गरे । फिल्ममा चाहि विशेष गरी मलाई उहाँले नै छिराउनु भएको हो ।
त्यहि हो डेढ वर्ष जस्तो मैले मेरो डेब्यू फिल्म ‘किन गरे माया’ को लागि दिएको छु । सिर्जना तयार भएको छ हेर्नका लागि । अब जेठ १४ गतेदेखि अल नेपाल रिलिज हुँदैछ । आफ्ना नजिकका सिनेमा घरमा गएर फिल्म हेरि मेरो कामको मूल्याङ्कन गरिदिनु होला । मेरा कमी कमजोरी औल्याइदिनु भयो भने मलाई आगामी दिनमा अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने थियो । मेरो डेब्यू फिल्म हो प्रयास मिहिनेत धेरै गरेको छु । तपाईलाई मनपर्न सक्छ एकचोटि हेरिदिनु होला ।